Ampidino Malwarebytes Anti-Malware ho an'ny Windows
Ampidino Malwarebytes Anti-Malware
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (60.10 MB)
Ampidino Malwarebytes Anti-Malware,
Rindrambaiko samihafa am-polony maro izay mandrahona ny solosainantsika, toy ny viriosy, kankana, spyware, ary koa malware, dia mety hiteraka vokany lehibe toy ny fahaverezanny data, ny fatiantoka ara-nofo ary ny fitondran-tena, ary sarotra be ho anireo mpampiasa ny manohitra azy rehetra aminny fampiasana antivirus iray ihany.
Satria na dia mahomby aza ny programa antivirus aminny fitadiavana fandrahonana mivantana, dia tsy ampy izany raha ny fandrahonana miafina kokoa sy feno tsipiriany. Malwarebytes Anti-Malware program is among the free and quality application that try to hiaro you with such fandrows and create a effective wall against malware software. Ny fandrahonana mety hanoherana azy dia misy trojan, rootkit, kankana, spyware ary maro hafa.
Ho fanampinizay, azontsika atao ny milaza fa manakana sy manafoana ireo add-on toy ny pejy fandraisam-bahiny sy ny fantsom-pitaovana napetraka ao anaty tranokala toy ny govome.com, conduit, ask.com. Rehefa vita ny fizahana scanning dia asehonny programa aminao mivantana ireo rakitra voapoizina ao aminny solosainao ho tatitra, ka hahafahanao manao ny fanadiovana tadiavinao.
Ny dinganny fanadiovana dia fohy ihany koa ary maharitra segondra vitsy, mba hahafahanao manala ireo rindrambaiko mampidi-doza aminny solosainao nefa tsy misy ezaka. Ao aminny tabilao Settings, misy ny safidy ilaina rehetra izay mety hisy fiatraikany aminny fiasa miasa aminny alàlanny programa ary mamaritra hoe aiza no tianao hitarafana. Aza mandalo raha tsy manandrana Malwarebytes Anti-Malware, iray aminireo programa fanesorana malware mandaitra indrindra eny an-tsena.
Haben'ny rakitra: 60.10 MB